Abavelisi bePowder ye-Ibutamoren (MK677) -iPhcoker
Ibutamoren Mesylate (MK677) powder, ekwabizwa ngokuba yi-MK677, MK-677, MK-0667, kunye ne-L-163,191, …… ..
Ibutamoren Mesylate Aukuguquka Ukukhula kwehomoni yokukhupha into; kuguqula imetabolism yamanqatha omzimba; ukwandisa ubunzima besisipha kunye neethambo zamaminerali; Itshintsha imetabolism yomzimba
Into entle malunga ne-ibutamoren mesylate kukuba inyusa amanqanaba okukhula kwehomoni ngokunyuka okuncinci okanye ukungabikho kokunyuka kwezinye iihormoni, ezinje ngecortisol. ICortisol icinezela amajoni omzimba, anciphise ukupholisa amanxeba, kunye nokuphazamisa ukufunda kunye nenkumbulo, kwaye kuhlala kungalunganga ukuba le hormone inyuswe.
May UMK677 Unokuthi ancede ngoxinano lwamathambo
♦ I-MK677 inokuthi incede ukunyusa ukukhula kweMisipha
♦ I-MK677 inokuthi incede ukunciphisa ukuchitheka kwemisipha
♦ I-MK677 inokuthi incede ngokulala
May I-MK 677 inokuthi inciphise Iziphumo zokuguga
I-MK677 inokuba neeNootropic kwiBongo